Tetezan’i Tanjombato: lehilahy iray maty nitsoraka tanaty rano | NewsMada
Hatairana ny an’ireo teny Tanjombato raha nahita lehilahy iray nitsambikina avy eo ambony tetezana, omaly maraina. Nanano sarotra ny famonjena ka tsy tana ny ain’ity lehilahy namono tena ity.
Samy tsy nanampo na inona na inona ireo olona teny an-toerana fa izy efa niakatra ary nitsambikina avy hatrany tao anaty rano no nahataitra ireo teo amin’ny manodidina. Izy nidoboka tao anaty rano aza vao taitra ny olona ary samy nifampanontany ny antony nahatonga ity lehilahy ity hamono tena nitsambikina tao ambaty tetezana. Olona mipetraka eny Tanjombato ihany izy, araka ny fanazavan’ireo olona mahafantatra azy. Niezaka nanao ny famonjena azy ihany ireo lehilahy matanjaka ary niroboka tao anaty rano mihitsy nitady azy, saingy nanano sarotra izany noho ny haavon’ny rano. Somary manakaiky ny barazy ihany koa ity toerana nitsambikinan’ilay lehilahy ity ka mahery ny rano teo amin’ny faritra misy ny barazy. Niala maina anefa ireo nanavotra satria tsy hita mihitsy ny nanjavonan’ity lehilahy ity. Voatery tsy maintsy nantsoina ny mpamonjy voina taorian’izay. Fotoana fohy taorian’izay, tonga teny an-toerana ny fiaraben’ny mpamonjy voina niaraka tamin’ireo manampahaizana manokana momba ny fikarohana olona anaty rano. Mpamonjy voina roa lahy no niezaka nanao izay ho afany nifandimby nitady tao anaty rano niaraka tamin’ny tavoahangy lehibe misy rivotra fitondra rehefa misitrika any anaty rano.
Adiny iray mahery ny fikarohana…
Naharitra adiny iray mahery ireo mpamonjy voina nanao ny fikarohana. Raha ny fanazavan’ireo olona mahafantatra azy, mpamily taxi-be ny asany ary manana olana ity lehilahy ity ka ahina ho misy ifandraisany amin’izany izao famonoan-tena nataony izao. Mbola hita teny aminy avokoa ny fitafiany rehetra tamin’ny fotoana nampiakaran’ny mpamonjy voina azy. Taitra tampoka ny renin’ilay lehilahy raha nahita ity fatin-janany nampiakarin’ny mpamonjy voina avy ao anaty rano. Na izy aza, tsy nanampo izao loza izao ary tsy nahafantatra mazava ny anton’izao famonoan-tena izao.
Tsy vao izao no nahitana trangan-javatra toy izao eto amin’ity tetezan’i Tanjombato ity. Lasa toerana famoizam-po ho an’ireo olona tsy mahazaka onjam-piainana sy resim-pitiavana iny toerana iny. Na eo aza ny hasarotry ny fiainana, “lahitokana ny aina sy mamy ny aina”, hoy ny fomba fitenintsika Malagasy izay.